Vaovao - Inona no fanasokajiana sy fiasan'ny siny
Miasa amin'ny fotoana samihafa ny mpitrandraka ary hisafidy kojakoja fampitaovana isan-karazany, kojakoja iraisana toy ny siny, mpanapotipotika, mpangalatra, fametahana hydraulic sns. Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo kojakoja mety fotsiny ihany no ahafahantsika mahazo fahaizana miasa haingana sy mahomby amin'ny toe-javatra iasana isan-karazany. fa fantatrao ve? Ho an'ny toe-javatra iasana isan-karazany dia misy karazana siny excavator mihoatra ny folo, izay samy manana ny tombony ananany. Ireto manaraka ireto dia ny siny fandavahana matetika. Ny fanananao azy ireo dia azo antoka fa hahatonga anao ho matanjaka kokoa ny fitaovana!
1. Siny mahazatra
Ny siny mahazatra dia siny mahazatra izay mahazatra amin'ny mpitsongo kely sy salantsalany. Mampiasa hatevin'ny lovia mahazatra izy io, ary tsy misy fanamafisana miharihary amin'ny vatan'ny siny. Ny mampiavaka azy dia ny: ny siny dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa, velarana lehibe kokoa eo am-bava, ary misy toerana ambonimbony kokoa, noho izany dia manana antonony famenoana bebe kokoa izy, fahombiazan'ny asa be, ary vidin'ny famokarana ambany. Izy io dia mety amin'ny tontolon'ny asa maivana kokoa toy ny fitrandrahana ny tanimanga ankapobeny sy ny fametrahana fasika, tany ary vatokely. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny siny fiaramanidina. Ny fatiantoka dia: noho ny hatevin'ny takelaka kely, ny tsy fisian'ny teknolojia fanamafisana, toy ny takelaka fanamafisana sy takelaka mitafy, fohy ny fiainana.
2. Hamafiso ny siny
Ny siny nohamafisina dia siny iray izay mampiasa fitaovana vy tsy mahazaka hery mafy hanamafisana ny fihenjanana mafy sy ireo ampahany tonta mora foana amin'ny fototra niaingan'ny siny mahazatra. Tsy mandova fotsiny ny tombony rehetra amin'ny siny mahazatra, fa manatsara be ny tanjaka sy ny fanoherana koa. Abrasiveness sy androm-piainana maharitra. Izy io dia mety amin'ny fiasan'ny asa mavesatra toa ny fihadiana tany mafy, vato malemy kokoa, fametahana vatokely sy vatokely.
3. Tavoahangy vato
Ny siny mihady vato dia mandray takelaka matevina amin'ny ankapobeny, manampy takelaka fanamafisana eo ambany, manampy mpiambina sisiny, mametraka takelaka miaro, nify siny mahery, mety amin'ny fametahana vato, vatolampy ambany, vatolampy voajanahary, vatolampy mafy, fipoahana voa , sns. Tontolo iainana mavesatra. Ampiasaina be izy io amin'ny fepetra miasa mafy toy ny harena ankibon'ny tany.
4. Siny fotaka
Ilay siny fotaka fandavahana dia fantatra amin'ny anarana hoe siny dredging. Tsy misy nify izy io ary manana sakany lehibe. Ny siny dia tena mety amin'ny famonosana ny tehezan-tendrombohitra miaraka amin'ny fahaizany lehibe, ary ny fitrandrahana ny renirano sy ny hady.
5. Manasivana ady
Izy io dia mety amin'ny fitrandrahana fitaovana misaraka malalaka. Ny fihadiana sy ny fisarahana dia azo tanterahina indray mandeha. Ampiasaina be izy io amin'ny tetikasa kaominaly, fambolena, ala, fiarovana rano, ary tetik'asa momba ny tany.
Ny nify siny dia miankina amin'ny tontolo iainana miasa mandritra ny fizotran'ny fampiasana mba hamaritana ny karazana nify bucket manokana. Amin'ny ankapobeny, ny nify sifotra an-doha dia ampiasaina amin'ny fihadiana, fasika misy toetr'andro, ary arintany. Ny nify siny karazana RC dia ampiasaina amin'ny fangadiana vato mafy be, ary ny nify siny karazana TL dia matetika ampiasaina amin'ny fangadiana ny vaingan'afo. Ny nify siny TL dia afaka mampiakatra ny tahan'ny famokarana vongan arina. Amin'ny tena fampiasana, matetika ny mpampiasa dia tia nify siny karazana RC amin'ny tanjona ankapobeny. Soso-kevitra ny tsy hampiasa nify karazana siny RC amin'ny toe-javatra manokana. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa nify siny an-doha, satria ny nify siô karazana RC dia hitombo toy ny "totohondry" rehefa lany andro lava. Mihena ny fanoherana mihady ary very maina ny herinaratra. Ny nify sifotra vava dia mitazona tampoka maranitra mandritra ny fizotran'ny akanjo, izay mampihena ny fanoherana ny fihadiana ary mamonjy solika.
02. Soloy nify siny ara-potoana
Rehefa misasatra kokoa ny tendron'ny nify siny dia tsy azo ihodivirana ny fitomboan'ny hery takin'ny excavator mandritra ny asa fandavahana, izay miteraka fanjifana solika bebe kokoa ary misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny asa. Noho izany dia ilaina tokoa ny manolo ireo nify siô vaovao rehefa ara-potoana rehefa matotra kokoa ny akanjo nify.
03. Soloy ara-potoana ny seza nify
Ny fitafiana ny seza nify dia tena manandanja ihany koa amin'ny androm-piainan'ny nify siny amin'ny fihadiana. Manolo-kevitra ny hanolo ny seza nify aorian'ny 10% -15% ny seza nify efa reraka, satria misy haben'ny akanjo eo anelanelan'ny seza nify sy ny nify siny. Ny elanelana lehibe dia manova ny tandrify sy ny fihenjanana amin'ny nify siny sy ny seza nify, ary vaky ny nify siny noho ny fiovan'ny teboka hery.
04. Fanaraha-maso isan'andro sy fanamafisana
Amin'ny asa fikojakojana isan'andro an'ny excavator dia makà 2 minitra isan'andro hijerena ny siny. Ny tena atiny fanaraha-maso dia: ny haben'ny fiasan'ny vatan'ny siny sy raha misy triatra. Raha henjana ny haavon'ny akanjo dia tokony hodinihina ny fanamafisana. Mikasika ny vatan'ny siny misy triatra kosa dia tokony amboarina amin'ny alàlan'ny fantsom-pandehanana ara-potoana izy io mba tsy hampitombo ny halavan'ireo vaky noho ny fanamboarana tara ary miteraka fikolokoloana tsy azo atao. Ho fanampin'izay dia tsy maintsy alefanao amin'ny tongotrao ny siny siny mba hahitana raha milamina ny nify. Raha malalaka ny nifiny dia tokony hohamafisina eo noho eo izy ireo.
05. Manova toerana aorian'ny fitafiana
Ny fampiharana dia nanaporofo fa nandritra ny fampiasana nify bucket excavator, ny nify ivelany indrindra amin'ny siny dia mitaingina 30% haingana kokoa noho ny nify anatiny indrindra. Manolo-kevitra ny hamadika ny toeran'ny nify anatiny sy ivelany aorian'ny fampiasana azy.
06. Tandremo ny fomba fiara
Ny fomba mitondra fiara an'ny mpamily excavator dia tena manadanja ihany koa hanatsara ny fampiasana ny nify siny. Ny mpamily excavator dia tokony hiezaka ny tsy hamerina amin'ny laoniny ny siny rehefa manainga ny fipoahana izy. Raha mampiakatra ny baomba ny mpamily raha averina amin'ny laoniny ny siny, io fiasa io dia hiharan'ny fiakarana miakatra ny nifiny, ka rovitra ny tampon'ny siny avy eo ambony, ary rovitra ny nifiny. Ity hetsika ity dia mitaky fiheverana manokana ny fandrindrana ny hetsika. Ny mpamily excavator sasany dia matetika mampiasa hery be loatra amin'ny hetsika fanitarana ny sandry sy fandefasana ny sandrin-tanana, ary "mandondona" haingana ny siny amin'ny vatobe na manery ny siny amin'ny vatolampy, izay hanorotoro ny nify siny, na Mora ny vaky ny siny ary simba ny sandry.
Ny mpamily excavator dia tokony handinika ny zoro fihadiana mandritra ny fiasa. Rehefa mihady volo mihintsy ny nifin'ny siny, na ny zoro camber dia tsy mihoatra ny 120 degre, mba hialana amin'ny famakiana ny nify siny noho ny firongan'ny be loatra. Mitandrema ihany koa mba tsy hanefy ny sandry mihady ankavia sy ankavanana eo ambanin'ny fanoherana lehibe, izay hahatonga ny nify siny sy ny seza fiasana ho tapaka noho ny hery be loatra amin'ny ankavia sy ankavanana, satria ny fitsipiky ny famolavolana mekanika an'ny ankamaroan'ny maodelin'ny nify siny dia tsy mihevitra ny hery eo ankavia sy ankavanana. mamaritra.
Miasa amin'ny fotoana samihafa ny mpitrandraka ary hisafidy kojakoja fampitaovana isan-karazany, kojakoja iraisana toy ny siny, mpanapotipotika, mpangalatra, fametahana hydraulic sns Ny fisafidianana ny ...